Enda Kumasoja neVeteran Shamwari Koreji »Hodges U
Kumba kana Kunze kwenyika, Tinotsigira Mauto Edu!
PaYunivhesiti yeHodges, iwe uchaona kuti kuve unoshamwaridzika wemauto hachisi chimwe chinhu chatinotaura, iri danho rerutsigiro runopfuura kupfuura mukirasi. Kubva kunzvimbo dzakazvitsaurira, nzvimbo dzekupaka dzakasarudzika, zvirongwa zvakasarudzika, uye nekuenderera mberi nebasa rekutsigira, isu tinoteedzera kuzvipira kwedu kwauri uye nemhuri yako kubva pane zvekutanga kusvika kumatunhu makuru
Pamusoro pezvo, isu takazivikanwa se 2019-2020 Goridhe Yemauto Shamwari Chikoro, 2018-2020 Mauto Nguva Yakanakisa yeVets Koreji, Yero Ribbon Mutora chikamu, Tumira 911 GI Bill® uye Masoja Akanaka Shamwari Chikoro yekuzvipira kwedu kunatsiridza hupenyu hwedu Anoshingaira Mauto, Veterans, uye Mhuri dzeMasoja.
Hodges isarudzo yepamusoro yevadzidzi vemauto uye veteran
Yero Ribbon Mutora chikamu.
Mauto / Veteran Shamwari Makampasi w / Akazvitsaurira Veteran Centers.
12 muzana yeVadzidzi Vese Vakashanda MuMasoja.
Kirasi Imwe Pamwedzi Hyper Inotarisa Fomati ndichibvumira Yakazara- kana Chikamu-chenguva Kunyoresa.
Yakabatanidzwa Certification mukati medu Degree Zvirongwa.
30 Years Kushumira Dzidzo yepamusoro vadzidzi.
Kutsigira kweVeterani Kunze kweChikoro
Hodges University inodada nevadzidzi vedu vemauto uye veteran uye inoratidza. Kubva kumauto ane hushamwari akasarudzika ekupaka kumakamuri ekuzvitsaurira, tinotenda mukupa mukana wakasununguka wevadzidzi vedu vemauto nevekare patiri pamakampasi.
Uye zvakare, isu tinopa ekutsigira masevhisi, rubatsiro neyedu nzira yekushandisa, veteran-yakatarwa rubatsiro rwemari rubatsiro, uye rubatsiro nekugadzira nzira yekubudirira kwako. Isu tinoziva shanduko kubva kumusoja kuenda kumudzidzi haisi nyore nguva dzose asi isu tinemi nhanho dzese dzenzira.
Kutsigira Kwemhuri Yemasoja
Tinogamuchira vakaroorana vechiuto uye mhuri dziri kutsvaga rutsigiro uye nzvimbo yavanogona kudaidza kumba apo vadikani vavo vari kushanda muchiuto. Kuva Wepamusoro Masoja Hushamwari Koreji, isu tinopa akawanda masevhisi akafanana anowanikwa kune veterans kumhuri dzavo futi.
Kunyangwe iwe kana mhuri yako muchida rutsigiro nerubatsiro nemari, kutsvaga basa, kurairwa kwehutano hwepfungwa, kana rutsigiro rwechinjo, isu tiripano kuzokubatsirai mese. Zviwanikwa zvinowanikwa pa-kambasi uye mukati memunharaunda. Izvi zviwanikwa zvinopa mhinduro kune chero dambudziko raungatarisana naro sewaimbova nhengo yemauto. Tinopa yakazara-nguva uye chikamu-chenguva-degree degree zvirongwa, mazhinji acho aunogona kutora online. Saka kunyangwe kana iwe usina chokwadi kuti uchave kwenguva yakareba sei munzvimbo medu, unogona achiri kupedza degree rako. Takatarisa pakubudirira kwako, isu tiri pano kuzokubatsira iwe kugadzira hupenyu hwaunofungidzira.
Hottest Degree Zvirongwa zveVadzidzi Vemauto:
Chiremba Chiremba Mubatsiri
Tuition Rubatsiro rwemauto uye Veteran Vadzidzi
Uchishandisa Yako VA Makomborero
KuHodges, tinoziva kukosha kwazvo kuti iwe ushandise zvakanakisa VA Zvako. Isu tine ruzivo mukukubatsira iwe kutarisira iyo post-9/11 GI Bill® maitiro ekushandisa. Kunyangwe iwe uchikodzera 100% mabhenefiti kana rakasiyana danho rebhenefiti, isu takazvipira kukubatsira iwe kuti uwane yakawanda mari sezvinobvira kune yako fundo. Ndosaka isu tichitorawo chikamu mu Yero Ribbon Chirongwa inopihwa neDhipatimendi reVeterans Affairs iyo inobatsira kuvhara mipata pakati peiyo post-9/11 GI Bill® uye inoda mari yedzidzo yako yepamusoro.
Nhengo dzese dzebasa rinoshanda dzinofanirwa kutaura neDzidzo Service Officer kana chipangamazano wemauto kuti vagamuchire mvumo vasati vanyoresa kuHodges University. HU yakagamuchirwa uye vanopa rubatsiro rwemari inowanikwawo kuti upindure chero mibvunzo yaungave unayo.
Yemauto Kudzidza Discounts
Paunosarudza Hodges, iwe uchagamuchira iyo chikoro chedzidzo ye $ 100 paawa yechikwereti yeva veterans vasina kukodzera kuwana VA dzidzo mabhenefiti kana mamwe madhiri echikoro. Vazhinji veterans vanowana bhenefiti redzidzo pakati pe40 ne100 muzana.
Isu tinopawo zvidzidzo zvechikoro kumauto anoshingaira. Bvunza isu kuti ungagamuchira sei kusvika $ 250 kudzikiswa paawa yechikwereti kubva yedu yakajairwa tuition mwero.
Uye zvakare, vedu vane hunyanzvi VSC Vashandi vachashanda nesimba kukubatsira iwe kuziva iyo rubatsiro rwemari izvo zvaunokodzera kuti ugone kutora nhanho inotevera mukuwana Kubudirira Kwako. Isu tiri imwe yenhamba yakasarudzwa yemayunivhesiti ayo anopa masevhisi kumauto edu ehondo, uye tinodada nekuve pano kuzokushandira iwe paunotora nhanho inotevera munzira yako yebasa.
Masoja Chidzidzo Chekubatsira Mari
Dzidzo Yekubatsira (TA) mari yakasarudzika, yakasarudzika sosi yemari yekubatsira inowanikwa kune vanokodzera nhengo dzeSevhisi. TA mabhenefiti anoiswa kumaakaundi emudzidzi pasati pawana chero rubatsiro rwemari rwunokodzera kupihwa nemudzidzi.
Vadzidzi vanokurudzirwawo kunyorera rubatsiro rwemari kuti vaone kuti ndezvipi zvimwe zvavanokodzera kuwana. Kuti uwane yemubatanidzwa, nyika, uye masangano rubatsiro rwemari (kusanganisira akawanda masifundi), zadza iyo Mahara Kunyorera yeFederal Student Aid (FAFSA). Kuti uwane rubatsiro rwemari, iwe uchada kugadzira Federal Student Aid ID kana FSA ID pa FSAID webhusaiti uye tumira iyo FAFSA pa fafsa.ed.gov.
Usatombo kunetseka kana Tuition Rubatsiro kana Yemari Rubatsiro inonzwika ichivhiringidza Hodges 'Veterans Services Center Vashandi ndivo pano kuti ndikubatsire neako Rubatsiro rweChikoro uye ichakutungamira kuburikidza nehurongwa hwekutsigira yako fundo. Unogona kuita izvi!
Air Force Chidzidzo Rubatsiro
Iwe unogona kunyorera Yekudzidzira Rubatsiro pamhepo pa Air Force Yechokwadi Yekudzidzisa Center. Iwe unofanirwa kugadzira zita remushandisi uye password usati wawana iyo yepamhepo TA chikumbiro.
Kunyorera TA, tevera nhanho idzi:
Sarudza Chikonzero Chekukumbira
Sarudza zita rechikoro
Pinda Mazuva Ekupedzisira
Pinda iyo Kosi Ruzivo
Pinda iyo Kubhadhara Mari
Chengetedza TA Ruzivo uye Tumira Chikumbiro
Mushure mekunge chako chikumbiro chabvumidzwa, iwe uchagamuchira kuziviswa kweyakagamuchirwa TA fomu. Fomu rakabvumidzwa richava nemasaini ese akatenderwa. Chekupedzisira, iwe unofanirwa kutumira kopi yeyakagamuchirwa TA fomu kuCashier's Office.
Nyorera Kuti Uwane Air Force Kudzidziswa Rubatsiro
Hondo Yedzidzo Rubatsiro
Kumbira Rubatsiro rweChikoro
Mushure mekunge chako chikumbiro chabvumidzwa, iwe uchagamuchira ziviso kubva GoArmyEd.
Kana iyo TA chikumbiro isina kubvumidzwa, GoArmyEd ichapa chikonzero pamwe nesarudzo.
Chekupedzisira, iwe unofanirwa kutumira kopi yeyakagamuchirwa TA fomu kuCashier's Office.
Nyorera Yeuto reChikoro Rubatsiro
Navy Chidzidzo Rubatsiro
Bata wako weNavy College chipangamazano kuti ugamuchire kuraira kwezvedzidzo uye kuti uone kuti ndedzipi dzidzo dzichakumbirwa kune Rubatsiro rweChikoro
Pedzisa iyo TA Kunyorera fomu uye dzokera kuNavy College Hofisi yako kuti igadziriswe.
Shanyira Navy College webhusaiti mamwe mashoko.
Nyorera YeNavy Tuition Rubatsiro
Marine Corps Kudzidziswa Rubatsiro
Iwe unofanirwa kunyorera uye ugamuchire mvumo yakanyorwa yeTA kuburikidza nehofisi yakakodzera yedzidzo usati wanyoresa.
kushanya usmc-ccs.org mamwe mashoko.
Nyorera Kune Marine Corps Kudzidziswa Rubatsiro
Coast Guard Kudzidza Rubatsiro
Iyo USCG Institute uye US Naval Dzidzo uye Kudzidziswa Nyanzvi Yekuvandudza Center gadziriso Yekubatsira Rubatsiro.
Iyo Coast Guard Institute inobvumidza iyo TA Kunyorera uye inopa iyo TA Mvumo fomu.
Iwe unofanirwa kutumira kopi yeiyo yakatenderwa fomu TA kuHofisi yeCashier's.
Kushanyirwa: iyo Navy College webhusaiti kana VA Inobatsira webhusaiti mamwe mashoko.
Nyorera Kune VA Makomborero
Mamwe mafomu eChikoro Rubatsiro
Rubatsiro rwechikoro handiyo chete sosi yemubatsiro wezvemari inowanikwa kuvadzidzi vechiuto nevekare. Kune akatiwandei marudzi erubatsiro rwemari, kusanganisira rubatsiro uye kudzidza, basa-kudzidza, uye zvikwereti.
Zvirongwa Zvekubatsira Kwemari zviripo zvinosanganisira:
Florida Mudzidzi Rubatsiro Grant
Florida Bright Futures Scholarship Chirongwa
Hodges Yunivhesiti Scholarships
Federal Basa Kudzidza
Zvikwereti zvevadzidzi / Federal Direct Mudzidzi Zvikwereti
Kuti uwane rumwe ruzivo, shanyira Hodges U peji rekubatsira mari.
Dzidza Nezve HU Mari Rubatsiro
Paunoshanyira Hodges University, tinokukoka kuti upedze nguva yakati kuVeterans Services Center (VSC) uko kwaunogona kuzvionera wega kuti hupenyu hwakaita sei kuHodges. Basa raDr. Peter Thomas Veterans Services Center kupa nzvimbo inogamuchira uye inodzidzisa kune vedu veterans nemhuri dzavo. KuVeteran Services Hofisi yedu (VSC), iwe uchagamuchira rutsigiro neruzivo zvine chekuita nedzidzo mari uye nhungamiro maererano nekugadzirisa kune hupenyu hwevadzidzi uye hwevanhu. Kunyangwe iwe uchienda kuNaples kana Fort Myers makampasi, kana kunyange Online, iwe unowana maVeterans Services Center Vashandi vakagadzirira kukubatsira iwe.
Nei iyo VSC kuHodges ichikosha? Isu takaona kuti rimwe rematambudziko makuru atinosangana nawo nevadzidzi vegakava kuwana pfungwa yekuva vechinangwa uye chinangwa. Isu tinonzwisisa kuti veterans vazhinji vanoshaya hushamwari hwavakanzwa vachiri pabasa uye vanoziva kuti urikuda kuyedza danho rinotevera muhupenyu hwako. Ziva chokwadi, sezvaunogadzikana zvakare muhupenyu husiri hwevanhu, iwe uri mune yakanaka kambani. Earl Hodges, zita rekuyunivhesiti, aive muhondo uye aive neshungu yekupa yakatanhamara dzidzo kune vedu vekare, uye vazhinji vematirastii, fakaroti, uye vashandi veHodges U varwi zvekare.
Vashandi veVeterans Services Center varipo kuti vakubatsire neiyi shanduko yakaoma nekupa nzvimbo yenzvimbo yedu yemauto kusangana uye kutaura nezve zvakaitika kwavari. Mukana wekuziva dzimwe nhengo dzechiuto dzinokubatsira iwe kuti uwane pfungwa yekuve wako unofanirwa kuti ubudirire muzvinangwa zvako zvedzidzo yepamusoro.
Dr. Peter Thomas aive ani?
Takapa zita reVeterans Services Center zita raDr Peter Thomas, murondedzeri akahwina mubairo uye muhondo yeHondo Yenyika II aive zvakare mugari weNaples kubva 1996 kusvika 2016. Muna 1943, apedza chikoro chesekondari, akapinda muUnited States Army uye akashanda pamwe neFirst Infantry Division mumatanho mashanu eEuropean. Thomas akagashira mibairo mizhinji yebasa rake, kusanganisira shanu nyeredzi dzehondo, imwe yemushandirapamwe wega wega, iyo Bronze Star, iyo Purple Moyo, iyo Unit French Croix de Guerre, uye Belgian Fourragère.
Thomas akapedza makore gumi nematatu sechibvumirano chenhau cheCBS asati aenda kunoteedzera yakazara-nguva yekuzvimiririra zvinyorwa uye basa rekurondedzera. Thomas akaenderera mberi nebasa rake rerondedzero uye akapa izwi-pamusoro pebasa kumashambadziro mazhinji eterevhizheni uye zvirongwa, zvinyorwa, uye mitambo yemitambo senge ESPN. Akatopa izwi kune iyo Philips HeartStart otomatiki ekunze defibrillator (AED).
Kuda kwaThomas kune avo vanoshandira muchiuto hakuna kupera, uye muna 2004, Hodges akamutumidza kuti Humanitarian wegore. Mugore rimwe chete irori, akatumidzwawo zita rekuremekedza Chiremba weHumane Tsamba. Kunyangwe Peter akashaya muna Kubvumbi 2016, nhaka yake inogara muPeter naStella Thomas Scholarship, iyo inopa rutsigiro rwemari kuvarwi vemauto vanoteedzera undergraduate kana masters degree.
Christin Olsen: Anorwa Veteran uye Anodada Hodges U Akapedza Kudzidza
Ndechipi chinetso chikuru chawakasangana nacho uye wakachikunda sei?
“Kuenda pamudyandigere kwangu kwakandiremera kukunda. Ndakagara mwedzi ndiri pamba ndichinzwa kushushikana uye kunzwa sekunge hupenyu hwangu hwaive hwapfuura pamakore makumi matatu ekuberekwa. Ini ndaive nehurongwa chaihwo uye zvinangwa zvehupenyu hwangu. Kurega kurapwa kubva pabasa randaida zvakanyanya kwaive kusiri kwavo. Rimwe zuva, ndiri mumajijama angu, masikati, ndakaona mwanakomana wangu achitevedzera zvandaiita uye ndipo paakandirova - uyu haasi iye mukadzi wandinoda kuti mwanakomana wangu atarise kwaari. Nekudaro, ini ndakatanga kutsvagisa makoreji emuno ndikadanana neHodges University. Hupenyu hausati hwapera kwandiri, zvave kutanga! ”
Zvinorevei kupihwa degree paHodges kwauri?
“Zvinoreva zvakanyanya. Ini ndinonzwa kuti ichavhura mikova yakawanda kwazvo uye ikandibatsira kuwana basa idzva randinoda. Ndinonzwa kufara nezveramangwana rangu nezvose zvarinazvo. ”
Tsigira Varwi Vedu
Isu tinopa zvirongwa zvekufunda pamwe neVeterans Center zvirongwa zvevadzidzi vedu vemauto nemhuri dzavo. Kana iwe uchida kutsigira veterans vedu, tinya pano kuti upe:
Veterans Center Kubata
4501 Colonial Boulevard, Washington, DC 33966
Bata maVeterans Services